Aamina Maxamed oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya | Salaan Media
Talaado, April 23, 2013 (HOL) – Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa galabta ku dhawaaqay qaar kamid ah golihiisa wasiirrada, iyadoo inta hartayna gadaal laga soo magacaabi doono.
Wasaarada arrimaha dibadda oo kamid ah wasaaradaha ugu muhiimsan ayaa loo magacaabay Aamina Maxamed oo asalkeedu Soomaali yahay, islamarkaana xilal kala duwan kasoo qabatay dalka Kenya iyo qaramada midoobay.
Haweenaydan oo ah diblamaasiyad caan ah ayaa xilal kasoo qabatay wasaaradaha arrimaha dibadda,cadaalada iyo dawladaha hoose.
Waxay kaloo noqotay ku xigeenka madaxa Hay’adda UNEP ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi iyo safiiradda Kenya u joogta xarunta qaramada midoobay ee Geneva, iyadoo sidoo kalana tartan u gashay inay qabato jagada ugu sarreysa hay’ada ganacsiga aduunka ee World Trade Organization (WTO).
Waxayna noqonaysaa haweeynadii ugu horreysay ee noqota wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, iyadoo sidoo kalana noqonaysa markii ugu horreysay ee wasaarada arrimaha dibada loo dhiibo gabar kasoo jeeda Soomaalida dalka Kenya.
Dawlada uu hogaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaad moodaa inay Soomaalida Kenya door muhiim ah ka ciyaarayaan, iyadoo hogaamiyaha isbahaysiga Jubilee ee aqalka baarlamaanka oo iyagu haysta aqlabiyada kuraastana loo magacaabay xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari.
Aamina ayaa markii la magacaabay Kadib sheegtay inay aad ugu faraxsantahay xilka loo dhiibay.
“Waan ku faraxsanahay sida uu ii sharfay madaxweynaha” ayay ku tiri hadal gaaban oo ay jeedisay iyadoo barbar taagnayd madaxweynaha.
Waxayna Aamina kamid tahay 4-ta wasiir ee uu sida rasmiga ah u shaaciyay Madaxweyne Kenyatta, iyadoo loo magacaabay Dr. Fred Okengo Matiang’i wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknoolajiyada, Mr. Henry K. Rotich wasiirka hanta dhowrka iyo James Wainaina Macharia oo isna loo magacaabay wasiirka caafimaadka.
Waxaana wasiiradan la horgaynaa barlamaanka si ay u ansixiyaan, iyadoo madaxweynuhuna uu ku tilmaamay inay yihiin dad lagu soo xulay aqoontooda ayna yihiin dad Kenya horumar gaarsiin kara.
Soomaalida dalka Kenya ayaa jagooyinka ay heleen loo malaynayaa inay ka dambayso taageeridii ay siiyeen Uhuru Kenyatta oo dadka gobolka waqooyi bari ka helay codad aad u badan.